Hippo Vhidhiyo: Boost Sales Response Rates Nekutengesa Vhidhiyo | Martech Zone
Vhidhiyo yeHippo: Boost Sales Response Rates Nekutengesa Vhidhiyo
Chitatu, November 24, 2021 Chitatu, November 24, 2021 Douglas Karr
Inbox yangu yanetsa, ndichabvuma hangu. Ndine mitemo uye maforodha akangwara anonangana nevatengi vangu uye zvimwe zvese zvinowira padivi penzira kunze kokuti zvinotora pfungwa dzangu. Mamwe matinji ekutengesa anomira pachena ndeemunhu evhidhiyo maemail akatumirwa kwandiri. Kuona mumwe munhu achitaura neni pachangu, kuona hunhu hwavo, nekukasira kutsanangura mukana kwandiri kuita… uye ndine chokwadi chekuti ndinopindura kakawanda.
Handisi ini ndega… kutengesa mavhidhiyo inzira yekukura kwepamusoro yekuti zvikwata zvekutengesa zvibude netarisiro nemakambani mazhinji achiona pamusoro pekusimudzwa kwe300% mumitengo yekupindura.
Mvuu Video Sales Engagement
Hippo Vhidhiyo inopa chikuva chakareruka chechikwata chako chekutengesa kuvaka kuvimba, kupa kukosha uye kusimudzira hukama netarisiro nerubatsiro rweCHAiyo uye mavhidhiyo evanhu. Nepo mushandisi wavo mushandisi ari nyore… akabatanidzwa mukati mebhari yako yebasa, musiyanisi chaiwo we Mvuu Vhidhiyo ndiwo hurongwa hwavo hwekubatanidzwa kwekutevera chiitiko chako chekutengesa mune angangoita maemail ese, manejimendi hukama hwevatengi (CRM), uye mapuratifomu ekugonesa kutengesa.
Mvuu Vhidhiyo inogonesa timu yako yekutengesa kurekodha vhidhiyo nekudzvanya kamwe chete, batanidza uye kugovera mavhidhiyo zvisina mutsetse pasina kuchinja mapuratifomu, uye wozoteedzera mitengo yekupindura kuti ukwidzise kufambira mberi uye kutyaira kwakawanda kutengesa.
Hippo Vhidhiyo Yepuratifomu Zvimiro
Video Editing -Ipa vhidhiyo yako kuyerera kwakaringana iwe yawaida nesarudzo yekuchekeresa kumbomira, zvirimwa zvisingadiwe, kudzima izvo zvekuwedzera kuti uchengetedze kutarisa, kurebesa saizi yako yemhando, uye spruce kumusoro nekuwedzera span emojis kana callouts.
Nhoroondo Yechokwadi -Simbisa yako vhidhiyo kumashure kune yaunofarira neyavo chaiyo yekumashure tekinoroji.
Vhidhiyo Overlays -Tora meseji yako zvinobudirira nekuwedzera mameseji nemifananidzo kuvhidhiyo yako.
GIF Embeds -Simuka mubhokisi remugamuchiri wako ane animated GIF zvigunwe zvinotamba kana vavhura email yako.
ekisipoti - Tumira kunze mavhidhiyo kuYouTube, G Suite, uye mamwe mapuratifomu zvakananga pasina kunetsekana.
Dana-Ku-Chiito - sanganisira yakasarudzika malink kuti utore musangano, kana wedzera yakasarudzika-yakagadzirwa span Call-To-Action mabhatani kuronga demo kana kufona.
Mapeji Ekutengesa Akasarudzika -Dira inotungamira kubva kune imwe vhidhiyo muraibhurari yemamwe mavhidhiyo anogona kubatsira kufambisira mberi tsvagiridzo yavo uye rwendo rwevatengi.
Vhidhiyo Teleprompter -Haasi munhu wese anogona kutaura zvakanaka pasina hurongwa… Mvuu Vhidhiyo ine teleprompter yakavakirwa kuti ikubatsire kufamba nemapoinzi ako akakosha kana nzwi rakadzama.
Prospect Tracking & Analytics -Ramba wakatarira maitiro ako evhidhiyo, avhareji chiyero chekutarisa, yakazara mitambo, migove, huwandu hwevanhu, vataridzi vakasiyana, uye chiitiko chakabva kumavhidhiyo ako.
Kubatanidzwa – Batanidza pamwe Gmail, Outlook, Salesforce, Hubspot, Outreach, SalesLoft, LinkedIn Sales Navigator, Pipedrive, ActiveCampaign, Slack, Zoom, Zapier, uye mamwe maturusi kuitira kuti chiitiko chako uye mhinduro zvinyorwe zvizere uye kuteverwa.
Kunze kwepuratifomu, kunyorera kwako ku Mvuu Vhidhiyo inosanganisira chaiyo-yenyika kudzidzisa uye mazano kubva kuna Jeffrey Gitomer.
Edza Mvuu Vhidhiyo Yemahara
kuburitsa: Ini ndiri mubatanidzwa weHippo Vhidhiyo uye ndiri kushandisa affiliate links mune ino chinyorwa.
Tags: ActiveCampaignanimated gifCRMeFreshdeskfreshservicehippo vhidhiyohubspotIntercomJiralinkedin sales navigatormailchimpPipedriveprospect analyticskutarisira kutsvagaKugonesa Kugonesamapeji ekutengesasalesforceSalesLoftvhidhiyo emailkushambadzira kwevhidhiyokuvharwa kwevhidhiyokutarisa kwevhidhiyomavhidhiyo ekutengesa mafonivhidhiyo yekutengesa kudzidzisavhidhiyo teleprompterWordPresskubasaYouTubezapperzendeskzohodesk
Douglas Karr Wednesday, November 24, 2021 Wednesday, November 24, 2021
Telbee: Bata mameseji ezwi kubva kune Vateereri vako vePodcast
Spocket: Tanga uye Seamless Batanidza Bhizinesi Rinodonhedza Neyako Ecommerce Platform
Yedu Yazvino Podcast
© Copyright 2022 DK New Media, Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa
Mashandisiro Atinoita Ruzivo Rwako